Video+ Warbixin Murugo Badan Daawo Gabar lix bil keliya jirta oo La kufsaday Muuqaal – Marqaanmedia24.com
Gabar lix bilood jir ah ayaa lagu kufsaday laguna dilay gobolka Madhya Pradesh ee dalka Hindiya, falkaasi oo noqonaya kii ugu dambeeyay falal taxana aha oo kufsi loogu geystay caruur badan oo dalkaasi ku sugan, taasi oo lagu tilmaamay in dalku uu galay xaalad degdeg. Jismiga ilmahan yar oo wadda dhiig ah ayaa laga helay qeybta hoose ee dukaan ku yaalla magaalada Indore ee dalkaasi.
Ilmaha yar ayaa xiligii la afduubanayay waxa ay la jiiftay waalidkeed laamiga, kuwaasi oo ka mid aha dadka hoy la’aanta ku ah Hindiya.
Dibadbaxyo ayaa ka soconayay dhawaanahan guud ahaan dalka Hindiya, kaddib markii ay kordheen kiisaska caruurta la kufsado.
Ra’isal wasaaraha Hindiya Narendra Modi, ayaa la filayaa inuu gudoomiyo maanta kulanka golaha wasiiradda oo looga baaraan degayo hindisa sharciyadeed lagu soo bandhigayo ciqaabta dilka ee ka dhanka ah falalka kufsiga.
Saraakiil dowladda ka tirsan ayaa muujiyay in ku dhawaad 19 kun oo kiisas kufsi ah la diiwaangaliyay sanadkii 2016 keliya, tiradaasi oo ka badan tii la diiwaangaliyay 20015-ki. Dawladda Hindiya ayaa dhawaan xoojisay sharciyada lagula dagaallamo xadgubyada dhinaca galmada kaddib markii ay dhaceen dhowr kufsi oo warbaahinta dunida ay si weyn ugu hadashay.
HALKAN KADAAWO MUUQAAL
allmarqaaneey qubxiga naga aala
gabar lix bilood jirta in siil ku yaalo shaki baaba iiga jira.
xagee guska la marinayaa-xitaa lojiga baan aqbalayn. war heedhaha bahalku inuu koro buu u baahan yahay before it provides the service